China IV Catheter orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Medicom
Miaraka amin'ny seranana / karazana lolo / Pena toa tsindrona
Ny fanjaitra dia vita amin'ny vy ambony 304st stainless
Ny foibe sy rakotra dia vita avy amin'ny kilasy fitsaboana PC sy PE
Ny fantsona dia vita avy amin'i Teflon miaraka amina tsipika mifanohitra x-ray miorina telo
Diovy amin'ny tananao ny fanadiovana alikaola.
Apetraho ny sandry mba hahazoany aina ny marary ary fantaro ny lalan-drà
Ampiharo ny tourniquet ary jereo indray ny lalan-drà
Ataovy ny fonon-tànanao, diovy amin'ny hoditry ny alikaola ny hoditry ny marary ary avelao ho maina izy.
Esory ny fonosana ao anaty fonosany ary esory ny fonon'ny fanjaitra mba tsy hikitika ny fanjaitra.
Ahinjiro lavitra ny hoditra ary ampahafantaro ny marary fa tokony hanantena fery maranitra izy ireo.
Ampidiro ny fanjaitra, bevel miakatra amin'ny 30 degre. Mandrosoa ny fanjaitra mandra-pahatongan'ny fiverenan-dra ao amin'ny foibe ao ambadiky ny cannula
Raha vantany vao hita ny fiverenan'ny rà dia mandrosoa 2mm fanampiny hatrany amin'ny kanelina, avy eo amboary ny fanjaitra, mandroso ny sisa amin'ny kanelina mankany amin'ny lalan-drà.
Alefaso ny tourniquet, apetaho ny tsindry amin'ny faran'ny kanelina ary esory tanteraka ny fanjaitra. Esory ny satroka amin'ny fanjaitra ary apetaho amin'ny faran'ny cannula.
Atsipazo tsara ao anaty fitoeram-pako ny fanjaitra.
Apetaho amin'ny cannula ny fiakanjoina mba hametahana azy amin'ny toerany ary hiantohana fa vita sy napetraka ny sticker.
Hamarino raha tsy lany ny daty nampiasana ny sira. Raha toa ka tsy maninona ny daty, fenoy masira ny syringe ary atsofohy amin'ny alàlan'ny cannula hizaha ny patanty.
Raha misy ny fanoherana, na raha miteraka fanaintainana izany, na mahatsikaritra ny fivontosan'ny sela eo an-toerana ianao: ajanony avy hatrany ny fikosehana, esory ny kanelina ary manomboka indray.
Fonosana blitter mafy ho an'ny tsirairay
50pcs / boaty 1000pcs / baoritra
5.Aza averina tsindrona rehefa tsy nahomby ny voalohany
Previous: Stopcock telo lalana
Manaraka: Combi Stopper
Catheter Butterfly Iv
Catheter Ivon'ny Peripheral
Ny haben'ny lelan'ny fandidiana, Pads amin'ny alikaola, Suction Catheter, Tube fihinanan-jaza, Alikaola, Iv Catheter,